လူတွေဟာ အမှောင်ထဲမှာ နေရတာကို အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အမှောင်ထဲကနေ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မှာ တစ်ချို့လူတွေကတော့ အဲ့ဒီ့အမှောင်ကိုပဲ လင်းလာအောင် အမှောင်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ပဲ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကံကြမ္မာဆိုတာကို သင်ယုံကြည်ပါသလား? ကံကောင်းခြင်း၊ ကံမကောင်းခြင်းတွေရော လက်ခံပါသလား? ဒီကနေ့မှာတော့ ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင် ကံကောင်းခြင်းတွေကို မရရအောင် ရှာဖွေတတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ သူတို့အတွက် ရှုံးနိမ့်တယ်ဆိုတာ အတော်ကြီးကြုံတောင့်ကြုံခဲအဖြစ်အပျက်ပါပဲ
လူတွေဟာ အမှားသေးသေးလေးတစ်ခုကြောင့် နောက်ပြန်လှည့်ကြချေးဆိုရင် အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာ ဘယ်တော့မှ ရောက်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လိုလူမျိုးတွေဟာ ကျရှုံးမှုတွေဆိုတာ သာမန်အခြေအနေ/အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဆိုတာ နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ထွက်ပေါက်ဆိုတာ အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တော်ရုံရှုံးတာကလည်း အရှုံးလို့ မသတ်မှတ်ဘဲ သင်ခန်းစာတစ်ခုအဖြစ် လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ သူတို့အတွက် အရှုံးတွေဆိုတာ တော်ရုံမကြုံရတတ်ကြပါဘူး။
၂။ သူတို့ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ကြိုးစားကြပါတယ်
အမြဲတမ်းကောင်းနေခြင်း၊ လူတိုင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် ပြုလုပ်ခြင်းက အောင်မြင်မှုအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့လူတွေက သူတို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ဖော်ပြဖို့ နှင့် လိုက်လျောဖို့ ကြိုးပမ်းသော်လည်း တစ်ချို့ကတော့သူတို့ရဲ့ ရာထူးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံကာကွယ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆိုးဆိုးရွားရွားဝေဖန်မှုတွေကို မကြောက်ပါနဲ့။ အပျက်သဘောမှတ်ချက်တွေကို ကြားပြီး အရှုံးမပေးပါနဲ့။ လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကံမကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံဖြေရှင်းနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မတရားမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြတယ်
တစ်ယောက်ယောက်က အဆုံးမဲ့ဒုက္ခတွေအကြောင်း ပြောဆိုမယ်။ တစ်ခြားတစ်ယောက်ယောက်ကလည်း သူတို့ဘဝအကြောင်း ၊ ပြဿနာတွေအကြောင်း စကားစမြည်ပြောလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ လူတစ်ချို့ကတော့ ဒါဟာ ဘာမှမထူးဆန်တဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ဟာ တစ်ခြားလူတွေကို ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ သာမန်ဖြစ်ကြောင်း ၊ လူတိုင်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မတရားမှုတွေအပြည့်ရှိနေကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းပြတတ်ကြပါတယ်။
၄။ သူတို့က စိတ်ခံစားမှုတွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို လျှော့တွက်ကြတယ်
စိတ်ခံစားမှုဉာဏ်ရည်နိမ့်ကျခြင်းဟာ အလုပ်ခွင်မှာသာမကဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝမှာပါ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်ဆိုတာ မသိသူတွေက အပြောင်းအလဲတွေကို အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့နှင့် လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ ပန်းချီပညာလေ့လာခြင်းနှင့် ရုပ်ရှင်ကောင်းတွေကြည့်ခြင်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။